समुन्द्रमा जलपरी पनि हुँदैनन्, राक्षस पनि हुँदैनन्, हुन्छ के?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
डिसी नेपाल , २२ जेठ २०७६
बीबीसी । हामीले फिल्ममा प्रायः समुन्द्रको डर लाग्दो अवस्था देखेका छौं होला । समुन्द्रको निलो सतह अचानक सेतो देखिन्छ । र त्यसमाथि तैरिएर आएको जहाजलाई आउँदै गरेको खतराको संकेत दिएको जस्तो लाग्छ । यस्तो डर लाग्दो अवस्था कैयौं मानिसहरुले देखेका छन् ।
तर वास्तावमा पनि कैयौं पटक समुन्द्रको एक ठूलो क्षेत्रमा पानी धमिलो हुन्छ । रातीमा चन्द्रमाको किरण उसमा परे पछि समुन्द्रमा यो झन डर लाग्दो देखिन्छ ।
सबैभन्दा पहिला यसको चर्चा क्याप्टेन राफेल सेम्मेसले १८६४ मा गरेका थिए । जब उनको जहाँ सीएमएस अलाबामा समुन्द्रबाट गएको थियो, त्यो बेला एक स्थानमा पानीको तस्वीरले उनलाई डराई दिएको थियो ।
क्याप्टेन राफेलले लेखेका छन्, ‘पानीको परिवर्तन भएको रंग देखेर यस्तो लाग्यो मानौ प्रकृतिले रै रुप परिवर्तन गरेको छ ।’ कुनै अरुले टाढाबाट धमिलो पानीम तैरिएको जहाज अलाबामालाई देखे, उनीहरुलाई लाग्यो समुन्द्री राक्षस तिब्ररुपमा उनीहरुतर्फ आइरहेको छ ।
पहिलाको सयममा मात्र होइन आधुनिक समयमा पनि मानिसहरु समुन्द्री राक्षस र जलपरीहरुमा विश्वास राख्थे । उनीहरुलाई लाग्थ्यो, धमिलो पानी भित्र राक्षस वा जलपरीहरु छन् ।
समुन्द्रको एक ठूलो क्षेत्रमा पानी धमिलो हुनुलाई अंग्रेजीमा मिल्की सी वा मरील भनिन्छ । यसको कारण ती ब्याक्टिरिया हुन जो समुन्द्रको सतहदेखि माथिल्लो भागसम्म रहन्छन् । अर्ब खर्बको संख्यामा हुने ब्याक्टिरियाकै कारण समुन्द्रको पानीले रंग परिवर्तन गरेको जस्तो देखिन्छ।
१९ औं शताब्दीका नाभिकहरु यस्तो दृश्य देखेर प्रयाः डराउँथे । तर, उनहरुलाई थाहा थिएन, पानीको रंग किन परिवर्तन भइरहेको छ । उनीहरुलाई पानीको रंग परिवर्तन हुनुमा कुनै षडयन्त्र वा खतरामात्रै देखिन्थ्यो । टाढाबाट यो दृश्य दुध जस्तो देखिन्थ्यो त्यसैले यसलाई मिल्की सी भनिन्थ्यो ।
हाल यो विषयमा हाम्रो बुझाई राम्रो भएको छ । तर, हामीलाई थाहा छैन, यो कसरी हुन्छ ।
स्टीभन मिलर अमेरिकाको कोलोराडो स्टेट यूनिभर्सिटीमा पढ्छन् । मिलर समुन्द्रका यी धमिला धब्बालाई स्याटेलाईटबाट देखिने सेतो व्हेल भन्छन् । पहिला पहिला स्याटेलाइटका सेन्सरले यसलाई देख्न सक्दैन थिए । तर, हाल जुन सेन्सर प्रयोग भएका छन्, त्यसले हल्का दागलाई पनि स्कान गर्न सक्छन् ।
स्टीभन मिलरले स्याटेलाइटबाट सबैभन्दा राम्रो तस्वीर १९९५ मा लिएका थिए । यो वाफबाट चल्ने जहाज लीमाको आसपास लिइएको थियो । यो जहाज त्यो बेला सोमालिया नजकिैबाट जाँदै थियो । त्यही बेला लीमाका क्याप्टेनले टाढा समुन्द्रमा धमिलो पानी देखेको कुरा गरे । टाढाबाट हेर्दा लाग्यो समुन्द्रमा हिमपात भइरहेको छ ।
मिलरले लीमाका क्याप्टेनको कुरा थाहा पाएपछि सोही समयमा त्यहाँ लगिएको स्याटेलाइट तस्वीरको अवलोकन गरे । स्याटेलाइट तस्वीरमा सो दृश्य कब्जा भएको थियो । यो क्षेत्र १५ हजार वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको थियो ।
मिलरले अझै पनि धमिलो समुन्द्रको रहस्योद्घाटन गर्न नसकिएके बताए । उनले त्यो दृश्य देख्न सकिए पनि कसरी भयो भन्नेबारे आफुहरुसँग कुनै प्रमाण भने नभएको बताए । उनले अझै पनि यो विषयमा थप जानकारी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हाल मिलरको टिमले समुन्द्रमा देखिने यो धमिलो मायाजालको प्रतिक्षा गरिरहेको छ ।
समुन्द्रमा हामीले प्रकृतिका यस्ता अरु पनि जादु देख्न सक्छौं र जस्तोकी अमेरिकाको फ्लोरिडा तट नजिक रातो ज्वार भाटा । हामीले अझै पनि समुन्द्रका धेरै यस्ता रहस्यबाट पर्दा उठाउनुपर्ने छ । नासाका अनुसार हाल वैज्ञानिकहरुसँग समुन्द्रको भन्दा धेरै जानकारी अन्तरिक्षबारे छ ।
संसारमा प्रविधिको यति विकास हुँदा पनि समुन्द्रबारे निकै थोरै जानकारी छ । त्यसैले समुन्द्रको डरलाग्दो लहरबाट जाने नाभिक आज पनि सबैभन्दा साहासी मानिन्छन् ।